डायलासिस मेसिनका ‘ब्लड पम्प’ हातैले घुमाउँछन् नर्सहरू – AayoMail
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन १९ गते १५:५३
कर्णालीको प्रदेश अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले फेसबुकमा पोखेको दुखेसो हो यो।
डा. केसीद्वारा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पोस्टेको केही घण्टा बित्न नपाउँदै कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा पुग्दाको स्थिति त्यस्तै थियो।
उनीसँग अस्पतालमा डायलासिस सेवाबारे बुझ्न नपाउँदै बत्ती झ्याप्प गयो। नर्सले अस्पतालका अर्का कर्मचारीलाई जेनेरेटर चलाउन फोन गरिन्। सँगै भएकी अर्की नर्स कृष्णा खनाल (समदर्शी) ले भने डायलासिस मेसिनको ‘ब्लड पम्प’ आफैंले घुमाउन थालिन्।
आइतबार अस्पतालमा डायलासिस गराइरहेका दैलेख आठबिस नगरपालिका–१ का बिरामी गणेश सुनारले भने, ‘बत्ती गएपछि रगत जम्न सक्छ रे ! उहाँहरूले बत्ती जानासाथ मेसिन घुमाउनु हुन्छ। पटक–पटक बत्ती जाँदा मनमा डर पनि लाग्छ। कतै शरीरको नसामै रगत जम्ने हो कि?’
छिनछिनमा बत्ती जाँदा भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ। आईसियू कक्षकी नर्स प्रतिमा पन्त (चपार्इं) ले भनिन्, ‘छिनछिनमा बत्ती जाँदा जेनेरेटर सुरु नहुँदासम्म हामी एम्बु ब्याग थिच्न थाल्छौं।’